Maxaa ka soo baxay shirkii madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ee Jabuuti? – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Maxaa ka soo baxay shirkii madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ee Jabuuti?
Allhadaaftimo June 14, 2020 Uncategorized
Magaalada Jabuuti ee caasimadda Jabuuti waxaa maanta lagu soo gaba-gabeeyay shir maanta ku dhex maray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jamhuuriyadda goonni isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland.
War-murtiyeed laga soo saaray shirkaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyay in la sameeyo guddi farsamo oo wada jir ah, kuwaas oo hawsha halkaa ka sii wadi doona isla markaana dib u eegi doona waxyaabaha horey loogu heshiiyay, in labada dhinac aanay siyaasadeyn kaalmooyinka horumarineed iyo maalgashiga iyo in dalka Jabuuti uu noqdo madasha kulammada dhanka farsamada ee lagu sii dhaqaajinayo wada-hadallada
“Kani waa shir ay isugu yimaadeen xubno ka wada tirsan hal qoys. Waligey waxaan sheegayay in waddamadeenu ay isku xirto hal xuddun. Waxaanu nahay walaalo wada dhashay, waana ku khasbannahay in aan taa ku faanno. Walaalayaal, geeska Afrika waxa uu soo maray muddo dheer oo ay ka jirtay dowlad xumo iyo hoggaan guuldareystay. Waxaan la qabsannay burburka, qaraxyada iyo muddo tobaneeyo sano ah oo dhaqaale xumo ah, kuwaa oo ka dhashay colaad caqli xumo ah. Waa in aan arrintaasi wax ka badalnaa oo aan billownaa bog cusub,” ayii yiri Abiy Axmed.
Previous Khudbadii Uu Madaxwayne Biixi Ka Jeediyay Shirkii Jabuuti
Next Khudbada Labaad ee Madaxweynaha S/land uu maalintii labad ka Jediyey Shirki Wada Hadalada Ee Jabuti